Home Wararka Gud. Rugta Ganacsiga Maxamud C. Gabeyre oo hanti ka dhacay dad shacab...
Gud. Rugta Ganacsiga Maxamud C. Gabeyre oo hanti ka dhacay dad shacab ah (Video)
Gudoomiyaha Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikarin Gabeyre aya hanti ka dhacay dad masaakiin ah oo ku nool duleedka Magaalada Muqadishu. Gabeyre oo ka mida Gacanyarayaasha uu ku shaqeeyso Ra’iisal Wasaaare Kheyre ayaa horay dhulal iyo handti kala duwan ugala wareegay dad shacab ah isaga oo isticmaalayo Xafiiska Ra’iisal Wasaare Kheyre. Dadkaan shacabka aya lagu qasbay in ay ka guureen dhul iyo hanti ah u haystan qoraali sharci oo cadeynayao in ay leeyihiin hantidaas.
Halkaan ka daawo dadka hantidooda la dhacay oo ka cabanayo dhaca iyo dhibka uu geeystay Maxamuud Cabdikarin Gabeyre.
Previous articleQarax xoogan oo ka dhacay Magaalada Muqdisho
Next articleQoraal ka soo baxay xafiiska Hanti Dhowrka Qaranka oo shaki badan abuuray? Ma madax bannaan yahay Hanti Dhowrka?
DEG-DEG: Beessh Caalamka oo dacwada ku soo oogtay DFS iyo kaalmadii la...
(Daawo) Wasiir Khadiija oo maanta arrin halis caafimaad leh ka sammeysay...